Ismiidaamiyihii Soobe Oo La Ogaaday Inuu Ahaa Askari ka baxsaday Ciidanka Dowladda. – Hornafrik Media Network
Saraakiisha Baaraysa Weerarkii lagu dilay in ka badan 300 Qof Sabtidii ayaa aaminsan in Ismiidaamiyuhu uu ka aargudanayay Howgal ka dhacay August Deegaanka Bariire, sida ay daabacday Jariiradda The Guardian.
Warbixinta Wargayska waxay intaasi ku dartay in Ninka waday Gaariga Wayn ee Xasuuqa ka gaystay KM5 uu horay u ahaa Askari ka tirsan Ciidanka Dowladda, kaasoo markii dambe ku biiray Kooxda Alshabaab. Waxaana Wargaysku leeyahay waxay Baarayaasha Kiiskan noo xaqiijiyeen in Ninka falka gaystay uu ka caraysnaa Weerarkii ka dhacay Beer ku taala Bariire.
Weeararka KM 5 waxaa ku dhintay in ka badan 300 qof, taasoo ka dhigan inuu yahay Weerarkii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca Caalamka wixii ka dambeeyay 11 September. Wali burburka Dhismayaasha ayaa laga baadi goobayaa Maydad. Iyadoona la la’yahay illaa iyo 100 Qof.
Al-Shabaab ma sheegan Masuuliyadda Weerarkaasi, balse Xubin ka tirsan Kooxda oo la qabtay wuxuu Baarayaasha u sheegay in Kooxdoodu ay masuul ka yihiin Weerarkaasi.
Baare ayaa u sheegay Wargayska in hadda arrintu u cadahay, Wuxuuna sheegay in Weerarka ay ku lug lahaayeen 2 Gaari oo mid yahay kan xasuuqa gaystay oo ay ku sheegeen inuu siday 350kg oo Qaraxyo ah iyo Gaari kale oo ah Toyota Noah. Isagoona ku doodaya in 2-da Gaari ay ku wajahnaayeen Garoonka Diyaaradaha Muqdisho oo ah goob si wayn loo waardiyeeyo, ayna ku yaalaan Xarunta Qaramadda Midoobay, Safaaradaha intooda badan iyo Xarunta Ciidanka Midowga Afrika.
Qorshaha ayaa ahaa in Gaariga yar lagu billaabo Weerarka, kaas oo loo qorsheeyay inuu ku hor qarxo Albaabka Medina Gate ee laga galo Xeradda Xalane, si uu wadada ugu xaaro in Gaariga wayn uu si fudud ku galo, taasoo ah Xeelad ay Maleeshiyaadku u dajiyeen Weerarkooda.
Gaariga yar Qaraxa kadib ayeey Ciidamaddu ku joojiyeen meel Boqolaal Mitir u jirta halka Weerarka u qorshaysnaa, kadibna Ismiidaamiyihii ayaa la qabtay, lana xiray, Gaarigiina wuu qarxay.
Darawalkan Gaarigan yar ee la qabtay waxa uu ahaa Nin waqti badan ku soo jiray Maleeshiyadda Alshabaab, kana qayb galay Weerarkii Hotel Jaziira ee Sanadkii 2012-ka, markaas oo la weeraray Hoteelka, iyadoo uu dagan yahay Madaxwaynihii hore Xasan Sh oo xilligaas aan wali la caleema saarin.
Ismiidaamiyaha gaystay Xasuuqa faraha badan ee waday Gaariga TM ka waxay baarayaashu u sheegeen The Guardian inuu ku biiray Ciidanka Soomaaliya 2010-kii, kadibna uu ka goostay Ciidanka, kuna biiray Kooxda Alshabaab 5 Sanno kadib oo ku beegan 2015-kii.